induction အပူပေးစက်နှင့်အတူ induction Brazing ကြေးနီ Tube
ပင်မစာမျက်နှာ / applications ကို / induction Brazing / induction ကြေးနီ Tube
induction Brazing ကြေးနီ Tube
အမျိုးအစား: induction Brazing Tags: ကြေးနီ brazing, brazing သော induction, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းကြေးနီကြေးနီပြွန်, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းကြေးနီပြွန်, သော induction brazing ကြေးနီ, သော induction brazing ကြေးနီပြွန်, induction brazing ထုတ်လုပ်သူ, induction brazing ပြွန်, RF brazing ကြေးနီပြွန်
အမြင့်ကြိမ်နှုန်းတွေကို RF အပူပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အတူ induction Brazing ကြေးနီ Tube
flux သို့မဟုတ်အက်ဆစ်ရေဆေးသန့်ရှင်းတဲ့-Up မပါဘဲ brazing များအတွက် 1450 စက္ကန့်အတွင်း° F ကို 45 မှအာဂွန်လေထုထဲမှာကြေးနီပြွန်စည်းဝေးပွဲကိုအပူရန်။
ကြေးနီပြွန်စည်းဝေးပွဲကို, အပူချိန် sensing ဆေးသုတ်, braze pre-ပုံစံများ
F ကို° 1450
DW-UHF-10kW သော induction အပူစွမ်းအင်၊ ၁.၂၅ microfarad capacitors (၀.၆၂၅ mfd ပမာဏ၏စုစုပေါင်းစွမ်းရည်) နှင့်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော inductor (coil) ပါသောဝေးလံခေါင်သီသောအပူပေးစက်။
အဆိုပါစမ်းသပ် 2% အာဂွန်နှင့် 95% ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုအရောအနှောများကို ABS, Mark5၌ပြစ်မှားမိခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်ဦးက specially- လေး-အလှည့်အုပ်စုခွဲ helical inductors ပြွန်စုရုံးပူးတွဲဧရိယာမှအကောင်းဆုံးအပူပေးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကနဦးစမ်းသပ်မှုတွေရှင်းလင်းသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အပူချိန် sensing နှင့်အတူကောက်ယူခဲ့ကြပြီးနောက်အချိန်-to-အပူချိန်နှင့်အပူ profile များကိုတည်ထောင်ရန်ဖျော, 1450 ° F ၏အပူချိန်ဟာ brazing pre-ပုံစံများကိုအရည်ပျော်ဖို့ 45 စက္ကန့်အတွင်းရောက်ရှိခဲ့သည်။
အောင်မြင်သောရလဒ်များသည် 1450 စက္ကန့်အတွင်း 45 ° F ကိုမှာအောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။ အပူပြွန်စည်းဝေးပွဲကိုမှတဆင့်ကျင်းပချိန် မှစ. အတူတူပင်စည်းဝေးပွဲကိုအပေါ်နောက်ဆက်တွဲအဆစ်လျော့နည်းအချိန်လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ ကြေးနီပြွန်အသင်းတော်များ Brazing များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ application ဖြစ်ပါတယ် သော induction အပူ.
ဘရာဇီး carbide အကြံပေးချက်များ
induction Brazing ကြေးနီ